मृत सागरको आकृति बनाई विश्व कीर्तिमानको प्रयास सफल
काठमाडौं – स्टेम फाउन्डेसन नेपाल र वातावरण विभागको संयुक्त आयोजनामा प्रयोग भइसकेका प्लास्टिकका झोलाबाट मृत सागरको आकृति बनाई विश्व कीर्तिमान राख्ने कार्यक्रमको प्रयास सफल भएको छ ।
विश्व वन्यजन्तु कोषको प्राविधि तर्फको र जगदम्बा स्ट्ल्सिले आकृति निर्माण गरी सहआयोजक भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा विभिन्न संघसंस्था तथा विद्यालयका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा ८७ हजार २ सय ३२ थान प्लास्टिकको झोला आकृतिमा बाँधिएको हो । वातावरणमा प्लास्टिकले पारेको असरलाई सांकेतिक रुपमा सिगापुरले ६८ हजार प्लास्टिकले अक्टोपसको आकृति निर्माण गरिएको रेकर्ड प्राप्त भएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद ईस्तिहाक राईले कार्यक्रमको सफलतासँगै प्लास्टिकले वातावरणमा परेको असर न्युनीकरणमा नेपाल सरकार जिम्मेवार रहेको बताए । उनले युवा पुस्ताको यस अभियानलाई समर्थन र सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
हजारौं नागरिकको उपस्थितिमा सो कार्यक्रम सम्पन्न हुनाले वातावरणप्रतिको संवेदनशीलता बढ्दै गएको छ । कार्यक्रममा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रविधि प्रमुख डा. रविन्द्र ढकालले प्लास्टिकबाट डिजेल बनाउने प्रविधि ल्याएसँगै प्लास्टिकमा न्युनीकरण भएको र प्लास्टिकको पूर्ण प्रयोगमा सबैलाई जोड दिन आग्रह गरे ।
आयोजकका तर्फबाट बोल्दै स्टेम फाउन्डेसनका अध्यक्ष सर्जन बिसीले पर्यावरण र प्रकृतिमा प्लास्टिकको अनावश्यक र अव्यवस्थित प्रयोगले पारेको नकारात्मक असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गर्दै नेपालीमा सचेतना ल्याउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।
विश्व कीर्तिमानको लागि पहिला दाखिला भएको रेकर्डभन्दा १९ हजार २ सय ३२ थान प्लास्टिकका झोला बढी बाँधिएको हो । कार्यक्रममा वातावरणविद् प्रा.डा. दिनेश भुजु, विश्व वन्यजन्तु कोषका उपनिर्देशक राजेन्द्र सुवाल लगायतका वक्ताले प्रतिवद्धता मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बागमती अभियन्ता डा. राजु अधिकारी र युवा अभियन्ता केपी खनाल लगायतले वातावरणप्रति जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका थिए । जगदम्बा स्टिल्सले संस्थागत सामाजिक दायित्व बहन गर्दै मृत सागरको आकृति निर्माण गरिदिएका हो ।
विश्व वन्यजन्तु कोषले वन, वातावरण र पर्यावरणका क्षेत्रमा यससँगै विभिन्न कार्यक्रममा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ । स्टेम फाउन्डेसन नेपालले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विश्व कीर्तिमानीका लागि प्रमाण पेश गर्ने जनाइएको छ ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरुद्धमा पत्रकार महासंघले गर्यो दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा
मुस्ताङको लोमन्थाङ : माटाको शहरमा महोत्सव
रोजगार कार्यालयको निरीक्षणमा मन्त्री बिष्ट